निको भएर पनि हार मान्दैन ओमिक्रोंन, १ महिनापछि पनि देखिन सक्छ यस्ता गम्भीर लक्षण ,बेलैमा सतर्क रहनुहोस् ! – List Khabar
Home / समाचार / निको भएर पनि हार मान्दैन ओमिक्रोंन, १ महिनापछि पनि देखिन सक्छ यस्ता गम्भीर लक्षण ,बेलैमा सतर्क रहनुहोस् !
निको भएर पनि हार मान्दैन ओमिक्रोंन, १ महिनापछि पनि देखिन सक्छ यस्ता गम्भीर लक्षण ,बेलैमा सतर्क रहनुहोस् !
admin January 21, 2022 समाचार Leaveacomment 35 Views
कोरोनाले विश्वभर तनाब मच्चाएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्टले स्थिति झन् खराब बनाएको छ। यो कोरोनाको सबैभन्दा घातक संस्करण मानिन्छ किनभने यो द्रुत रूपमा फैलिन्छ र पहिले नै निको भइसकेका र खोप लगाएकाहरूलाई असर गरिरहेको छ। नयाँ भेरियन्ट आएपछि कोरोना थप घातक बन्दै गएको छ ।
अहिले मानिसहरु एक/दुई पटक मात्र होइन धेरै पटक संक्रमित भइरहेका छन् । कुरा यहीं टुंगिएन, एक पटक संक्रमित भइसकेका र निको भइसकेका मानिसमा हप्तादेखि महिनासम्म कोरोनाका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । चिकित्सा भाषामा यसलाई लामो कोभिड लक्षण भनिन्छ । कोरोनासँग लड्दा मानिसमा लक्षण लामो समयसम्म रहनुका साथै धेरै जटिलताहरू पनि बढ्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
अध्ययनहरूले देखाएको छ कि केही व्यक्तिहरूमा, हल्का लक्षणहरू भएकाहरूमा पनि, लक्षणहरू निको भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म रहन सक्छन्। विज्ञहरुले कोभिड–१९ भाइरस भएको दाबी गरेका छन्लक्षणहरू निदान पछि चार हप्ता भन्दा बढी रहन सक्छ। त्यस्तै, डाक्टरहरूले ओमिक्रोनको मामलामा पनि चेतावनी दिएका छन्। उनी भन्छन् कि ओमिक्रोन भेरियन्टले पनि लामो कोविड निम्त्याउन सक्छ।
कोरोनाबाट निको भएको लामो समयपछि लक्षणहरू महसुस भएको अवस्थालाई जनाउँछ। यी लक्षणहरू संक्रमण कम भएको हप्ता र महिनासम्म महसुस गर्न सकिन्छ। अचम्मको कुरा, रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि
पनि कसैको गम्भीर लक्षण जारी रहन सक्छ र दैनिक कामकाजमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। वृद्ध र पुरानो स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई पुरानो कोभिड लक्षणहरूको उच्च जोखिममा रहेको विश्वास गरिन्छ । तर, युवा र स्वस्थ मानिस पनि कोरोना भाइरसको दीर्घकालीन प्रभावको सिकार हुन सक्छन् ।
धेरै मानिसहरू रिकभरीमा यो लक्षणबाट छुटकारा पाउँछन्, जबकि केही मानिसहरू गर्दैनन्। यसलाई मेडिकल भाषामा पारोस्मिया भनिन्छ । पारोस्मियाबाट पीडित जो कोहीलाई गन्धको विकृत भावना हुन्छ। यसको मतलब उसलाई सडेको फोहोर, पेट्रोल वा अम्लीय पदार्थको जस्तै गन्धको भावना हुन सक्छ। ४९ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसमा तीन महिनासम्म यो समस्या देखिएको र बाँकी ५०
दशमलव ७ प्रतिशतमा तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो लक्षण देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । लगातार खोकीजोर्नी दुख्ने, भीड लाग्ने, टाउको दुख्ने, मस्तिष्क कुहिरो लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, थकान लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने र अल्छी महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू पनि केही हप्तासम्म रहन सक्छन्। यी बाहेक, कपाल झर्नु पनि धेरै मानिसहरूमा एक सामान्य लक्षण हो।
Previous क्याम्पस पढ्ने उमेरका यि युवायुवतीको काम देखेर प्रहरी पनि चकित्, कीर्तिपुरवाट पक्राउ गरेर ल्यायो प्रहरीले
Next तपाइले कोभिडको कुन खोप लगाउनुभयो ? अब भेरोसेल खोप लगाउन नपाइने